Nandrahona ny handefa flamethrowers ny ben'ny tanana italiana hiady amin'ny coronavirus: Martin Vrijland
Nandrahona ny handefa flamethrowers ny ben'ny tanàna italiana hiady amin'ny coronavirus
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 Martsa 2020	• 14 Comments
Inona no tena endrik'ilay fitondrana miely amin'ny alàlan'ny politika sy ny media amin'ny alàlan'ny fanoherana? Mariho ny tandindona avana. Ny avana avy amin'ny avana ve no tandindon'ny firenen'ny tontolo vaovao? Moa ve difotry ny onjan-dranomasina toa izao tamin'ny andron'i Noa ny izao tontolo izao? Inona no nipoitra taorian'ny safo-drano? Ny avana?
"Mandefa ny flamethrowers izahay!" Hoy ny ben'ny tanàna italiana.
Ankehitriny dia mbola mieritreritra ihany isika fa tsy tokony handray an'ity ara-bakiteny ity, fa ahoana kosa raha hitranga ara-bakiteny izany? Jereo ny fiteny fandrahonana izay mivoaka avy amin'ny vavan'ity Ben'ny tanàna ity. Hanomboka hiatrehana ny coronavirus ihany koa ny minisitra Grapperhous ho 'tsy voafehy' ary 'lany tanana' amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao izany? "Satria tsy mihaino ianao fa tsy mijanona ao anatiny!"
Tadidinao izany fampitandremana izany tamin'ny Novambra 2019?
Ao amin'ny boky sy ny lahatsoratra maro (azo vakiana maimaim-poana) eto amin'ny tranokala dia nohazavaiko fa ny avana dia tandindon'ny Andriamanitry ny tontolo vaovao: Losifera. Ny filaharana tontolo vaovao dia miezaka ho amin'ny tontolo iray tahaka an'i Lucifer. Ny famantarana an'i Lucifer dia ny Baphomet: ny hermaphrodite (androgynous na 'neutral neutral') chimera buck (vakio eto ny sasany chimerism izany).
“Nosakanako izy ary niteny hoe: 'Jereo fa tsy sarimihetsika izany. Tsy ianao no Will Smith ao amin'ny I Am Legend. Mandehana mody. ”
Ity no fananganana fanavaozana fanavaozana ataon'ireo Ben'ny tanàna italiana ho very amin'ny olona manitsakitsaka # Covid19 ny fanokanan-toerana. Eny, marina ny dikanteny. pic.twitter.com/60V4Csuonb
Vincenzo De Luca, Ben'ny tanànan'i Campania any Italia
Ny boky manomboka amin'ny taona 2016 dia ny mason'ny haizina nataon'i Dean Koontz miresaka momba ny virus bioweapon Wuhan-400
Ny Trump, Q-Anon ary 'manadio ny angano lalina indrindra' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Coronavirus covid-19 fanavaozana mihidy: rehefa mifoha ianao ka mahatsapa fa voafandrika, inona no azonao atao?
Paran'i Coronavirus COVID-19: viriosy, bioweapon na fanaratsiana ho an'ny famerenana ara-bola sy fifehezana tanteraka?
Tags: ben'ny tanàna, Coronavirus, de, Featured, Italiana, Italia, Luca, miaro, avana, orana boky, ny, Vincenzo, flamethrowers
26 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 26
Ny fotoana atrehantsika izao? Minitra 3:17 ao amin'ny horonantsary
26 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 49
Mieritreritra mialoha aho tamin'ny 3:30 maraina rehefa misy olona mandrahona ny iray amin'ny soritr'aretin'ny Corvid.
Harry mampahafaty nanoratra hoe:
26 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 30
Lalao lalao video sasany, hoy ny iray amin'ireo manampahefana mpampihatra lalàna.
ny manam-pahaizana sasany, ao anatin'izany ny WHO, milaza ankehitriny fa goavam-be ny “virtoaly virtoaly” dia mipoitra izay ivoahan'ny "lalao" rehetra sy ny fanatsarana tanteraka, miaraka amin'ny olona ao amin'ny efitranony misy azy ireo izay voatery an-tery na antsoina hoe "an-tsitrapo" mitokana amin'ny virtoaly ny tany dia afaka mihetsika izay tsy takatry ny saina raha ny tena izy. Na ny programa fampianarana aza dia azo atolotra amin'ny ankizy amin'ny alàlan'ny tontolo virtoaly ka amin'ny ho avy tsy mila mianatra intsony izy ireo fa amin'ny “efitrano fianarana maya” izay ahafahan'izy ireo mahazo lesona amin'ny ankizy hafa avy amin'ny mpampianatra virtoaly izay mampianatra, ary ny tena tsy misy dia azo isehoana.
Voalaza fa tsy ho ela dia mila mitokana mandrakizay ny olona satria miakatra hatrany ny viriosy, fa amin'ny zava-misy iainana dia tsy olana mihitsy ary tsy te hivoaka any ivelany ny olona satria ny tontolo virtoaly izay Izy ireo dia afaka mihaona amin'ny rehetra tsy azo lavina amin'ny tena zavatra.
Koa ny transhumanism dia famporisihana be ihany koa amin'ny alàlan'ny antsoina hoe fanakorontanana sy fitokanan-tena ary tsy ho ela dia ho lasa ara-dalàna ary tena mandroso kokoa.
26 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 03
Ary ny ankizy kely izao dia ampianarina fomba fanaraha-maso ireo orsa. Soloy ireo bera ireo 'singa mampatahotra' ary inona no hitanao amin'ny fampiharana an'io?
26 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 00
Ny mpiasa mpitaiza sy ny olona manana asa tena ilaina manana hatsiaka dia afaka miasa fotsiny.
26 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 24
Ny ankamaroan'ny trano fisotroan-dronono ao Holandy dia manana hidy fehezanteny amin'ny sisin'ny vavahady sasany. Amin'izay dia tsy afaka manokatra varavarana avy ao anatiny ny zokiolona. Izany no teknolojia maoderina. Raha ahiana ny coronavirus dia hidiana ny varavarana. Matetika dia misy ny crematorium eo akaikin'ny trano fitaizana. Rehefa dinihina tokoa, dia ny mahazatra fiantsonana farany. Tsy afaka mitsidika intsony ny ankizy. Lockdown. Soa ihany, afaka miankina amin'ny fikarakarana tsara izy ireo. Mifehy tsara ny protocole ny mpiasa mpitaiza ary mety mihazona ny zokiolona voan'ny aretina ao amin'ny efitranony .. raha tsy izany dia mitera-doza ny otrikaretina ianao (ary tsy maintsy manditsaina ianao) na raha misy olon-dehibe lasa voan'ny aretina ... tsy mila izany ianao. Ny endrika miverina avy amin'ny laboratoara indraindray dia miteny hoe "coronavirus positive". Mahasorena ny manidy ny zokiolona toy izany, fa eny .. ”Tsy maintsy atao, tsy mahafinaritra izany, fa iza no afaka manohitra ny vokatry ny labera? Mifikitra amin'ny protocole ianao… ”
Hatao ahoana ny Harry Mens?
26 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 26
26 Martsa 2020 ao amin'ny 15: 39
Eny, Vincenzo de Luca. Misy iray ihany koa. Eo amin'ny toerana lehibe any Italia ihany koa izy ireo. Ny zava-drehetra dia atambatra sy atolotry an'i Hen. Hitan'izy ireo ny zava-drehetra, mamaritra ny zava-drehetra izy ireo, izy ireo no fanao, Izy ireo no manam-pahaizana, izy ireo ny mpanao gazety, izy ireo dia sandry mahery, sns. Ao anaty jadona jadona nofehezin'izy ireo fotsiny izahay. Ahoana no hialan-tsika, amin'ny sarambabem-bahoaka?
Olombelona nanoratra hoe:
26 Martsa 2020 ao amin'ny 17: 34
Voalohany indrindra aloha dia maniry hisaotra anao noho ireo lahatsoratra maro mahira-tsaina nandritra ny taona maro. Mba hanohanana ny asanao, fa ho an'ny votoatin'ny boky koa dia nibaiko. Manantena aho fa ny olona rehetra eto an-tany dia afaka mijery ny fitantarany izay ataony ary manontany tena lalina hoe inona ny fototry ny fiainana.
Maniry aho hanana tanjaka, fahendrena ary ny fahasalamana rehetra.
26 Martsa 2020 ao amin'ny 22: 40
Ny fitsapana ny tsimok'aretina Corona dia sandoka!
27 Martsa 2020 ao amin'ny 07: 09
Fizarana manan-danja fotsiny amin'ny alàlan'ny rohy izay mifamatotra amin'i jhonny
Ny CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel dia fanadinana RT-PCR tena misy mandritra ny fotoana fohy hita amin'ny famoahana qualitative asidra nokleat avy amin'ny 2019-nCoV amin'ny fitrandrahana taovam-pisefoana ambony sy ambany. ny fitrandrahana nasopharyngeal na oropharyngeal, sputum, fantsom-pisefoana ambany fantsona, famafazana bronchoalveolar, ary fanasana / aspirate nasopharyngeal na fitrandrahana nasal) izay nangonina avy amin'ireo olona mifanaraka amin'ny fitsaboana klinika sy / fitsidihan'ny aretin-taovolo (ohatra: famantarana ara-pitsaboana sy soritr'aretina mifandraika amin'ny 2019- Ny fihanaky ny nCoV, mifandray amin'ny tranga mety na voamarina amin'ny raharaha 2019-nCoV, tantara momba ny fitsangatsanganana mankany amin'ny toerana geografika izay nahitana ny raharaha 2019-nCoV, na rohy epidemiologie hafa izay ahitana ny fitiliana 2019-nCoV dia azo ampiharina amin'ny ampahany amin'ny fanadihadiana momba ny fahasalamam-bahoaka). Ny fitsapana any Etazonia dia voafetra amin'ireo laboratoara voamarina ao amin'ny fanitsiana ny fanatsarana ny laboratoara klinika tamin'ny taona 2019 (CLIA), 1988 USC § 42a, hanaovana fanadinana sarotra.
Ny valiny dia natao hamantarana ny 2019-nCoV RNA. Ny nomoV RNA 2019 dia matetika hita ao amin'ny fantsom-pisefoana ambony sy ambany kokoa mandritra ny tsimokaretina. Ny valim-pifandraisana dia manondro ny otrikaretina mavitrika miaraka amin'ny 2019-nCoV fa tsy manohitra ny areti-mifindra amin'ny bakteria na ny fiaraha-mikorana amin'ny otrikaretina hafa. Mety ho ny aretina voafaritra mazava tsara ilay mpandraharaha hita. Ny laboratoara ao Etazonia sy ny faritany dia takiana hitaterana ny voka-dratsiny rehetra amin'ireo manampahefana momba ny fahasalamam-bahoaka mety.
Ny voka-dratsy dia tsy manakana ny fihanaky ny 2019-nCoV ary tsy tokony hampiasaina ho fototry ny fitsaboana na fanapahan-kevitra fitantanana marary. Ny valin'ny negative dia tsy maintsy atambatra amin'ny fandinihana klinika, tantaram-paharetana ary fampahalalana epidemiological.
Tsy nahazo tombony amin'ny fizotran'ny otrikaretina izahay. Ahoana no famaritana ny drafitry ny fitsaboana ary ny fanafody ampiasaina? Protocol? Toy ny fanandramana amin'ny marary ny dokotera sy ny fijerena raha iray fitsaboana no fitsaboana. Ny fanontaniana dia ny marary tsy marary saina noho izany. Aza adino fa ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy dia tsy manao saron-tava foana ary noho izany dia afaka mamindra ilay aretina / aretina amin'ny mety ho marary marika. Ary indraindray dia manohy miasa nefa izy ireo aza dia manana corona. Ho faty amin'ny corona sa zavatra hafa ve ireo marary? Cui bono? Marina fa ireo injeniera sosialy izay manatsara an'izao tontolo izao.
ellysa nanoratra hoe:
27 Martsa 2020 ao amin'ny 00: 36
@ martin Ankoatry ny (ny firafitry ny) ny hevitr'ilay hafatra, dia diniho tsara ihany koa ny fitenin'ny vatana / ny endrika ivelany ataon'ireo mpitondra ireo na ireo mijaly
Raha misy ny fahatsapana sy ny fieritreretana, ny tena fikasana dia aseho an-tsehatra
Tsara homarihina koa izay feno ny fo ...
Ny fo Luciferian dia mampiseho tena amin'ny maso / endrika endrika sy fitenin'ny vatana.
Noho ny fisian'ny “faritra jamba” ao an-tsaintsika, dia noheverinay fa (ho lavo ny soso-kevitra isika) fa ny manam-pahefana ho namana dia olona sariaka / fo iray. Ny tena dikan'ny lanjan'ny tarehy.
Efa tonga amin'ny fotoana iray izay maneho ny tena endrik'izy ireo (persona = mask).
Ity rohy ity dia manome làlana sy ohatra lalindalina kokoa. Famantarana miainga avy amin'ny fahatsiarovan-tena.
Amin'ny sidina iray: AI dia hevitra tsy misy dikany loatra na mihoatra ny fahaizan'ny olombelona. Ny solosaina dia tsy ilaina ny (h) manaiky ny tena. Fa raha mbola tsy namerina ny tena maha izy azy (saina) ny olona tsirairay, dia mbola hangataka fahefana ivelany izy.
28 Martsa 2020 ao amin'ny 07: 33
Miantso ny fanjakana manerantany hiatrika ny coronavirus i Gordon Brown
Ex-PM teo afovoany tamin'ny banky famonjena 2008 dia nanolo-tsaina ny tompon'andraikitra amin'ny mpitondra sy ny manampahaizana momba ny fahasalamana
yep, mitombo tsy an-kanavaka ny fandaharam-potoanan'ireo ahiahiana efa mahazatra
« Ny Trump, Q-Anon ary 'manadio ny angano lalina indrindra' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Ny lehilahy heterosexual no tena lasibatr'ireo coronavirus? Ny fototry ny siantifika »
Martin Vrijland op Ny 'fahalavoan'ny' cabal 'dia ny hoe "Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Ramon op Ny 'fahalavoan'ny' cabal 'dia ny hoe "Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Harry mampahafaty op Ny 'fahalavoan'ny' cabal 'dia ny hoe "Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?